MOOSKA GUDUUDAN: SAWIR, DARYEEL IYO BEERASHADA GURIGA - SOOSAARKA DALAGGA
Sida loo koro muuska casaanka ah ee guriga?
Bannaan gaduudka ah ayaa ka muuqday waddankayagii dhowaa. Waxaa loo arkaa inay tahay qalab aan caadi ahayn.
Si kastaba ha ahaatee tani wax ka badan mid ka mid ah 40 nooc oo moos ah. Waxay ka timaadaa dalalka Aasiya iyo Koonfurta Ameerika.
Mooska cas aad u caan ah sababta oo ah miraha ay la dhadhan macaan iyo caraf udgoon, qoraalada raspberry iyo strawberry. Miro ayaa ka yaryar iyo cufnaanta caadiga ah, maqaarkoodu waa casaan-guduud. Miraha waxay yeelan karaan hilib midab casaan leh ama midab kareem ah.
Bannaan, oo ay ku jirto mid cas, ma aha geed timir ah, sida badanaa la moodo, laakiin cawska dilka ahoo ka tirsan qoyska Banana. Cabbirka weyn ee warshad cagaarsho leh waxay leedahay pseudostem awood leh, oo ah saldhig daboolan oo caleemo ah.
Xaqiiqada dhabta ah, taas oo sidoo kale ah isqabqabsi guud, oo la yiraahdo rhizome ee botany, ayaa lagu qariyay dhulka hoostiisa.
Laga soo bilaabo dhexe ee caleemo been ah inflorescencedhimanaya ka dib markii bilowga fruiting.
Nolosha rizoodhka - 35-45 sano. Inta lagu jiro waqtigan ka dib, fruiting, waxay sii deyneysaa habab badan oo cusub.
Sidee u kobcisaa mooska cas? Sawirrada dhirta iyo miraha.
Daryeelka saxda ah ee muuska casaanka ah ee guriga waa farsamo ahaan aan ka duwaneynin xannaanada muusiga caadiga ah. Haddii dhammaan shuruudaha looga baahan yahay dhirta lagu arkay, ka dibna guri caadi ah oo magaalada ah ayaad si joogto ah u heli kartaa miraha macaan.
Ka dib iibsashada waa in aysan ku degdegin wareejinta muuska casaanka ah iyo meelaynta dheriga. Waxaa fiican in laga helo xaaladaha guryaha sida ugu dhow ee suuragalka ah dukaanka, oo ka tago warshad ku habboon loogu rakibo ilaa hal toddobaad.
Muraayada casaan-gaduudka ayaa jecel sida iftiin leh. Daaqadaha soo wajahan koonfurta, bari iyo koonfur-bari waxay noqon lahaayeen kuwo ku haboon isaga. Xaaladaha khatarta ah, waxaad geyn kartaa geedka dhinaca galbeedka, laakiin halkan waxaa mar hore la rabaa in la isticmaalo iftiin dheeraad ah. Laakiin daaqada waqooyiga ee mooska guduudka ah ayaa ka wanaagsan inaanad dooran.
Haddii xagaaga aad ka soo qaadatid dhoobo leh muuska casaanka ah ee waddada, markaas waa inaad ka ilaalisaa iftiinka qorraxda toosan oo ku dabool faashad ama ku dheji dhirta geedaha.
Labada xagaaga iyo xagaaga heerkulka waa in lagu hayaa 25-30 digrii. Marka ay ku dhacdo calaamadda 15 darajo, habka koritaanka, iyo sidoo kale Bisaylkiisa midhaha, ayaa joojin doona. Marka xagaaga dhirta waxaa la saaraa balakoonka ama berriga iyo beerta maalinta, waa in loo qaato guriga habeenkii iyada oo aan lagu guulaysan.
Red Banana ayaa looga baahan yahay qoyaan badan oo hawo leh. Xilliga xagaaga waxaa lagama maarmaan ah in lagu buufiyo hawada maalin kasta, iyo jiilaalka toddobaadkii hal mar. Waxaa lagu talinayaa in badanaa tirtiro caleemo ka soo boodo.
Waraabinta booma casaan ayaa loo baahan yahay badan, sida caleemo waaweyn ayaa uumi badan.
Waraabinta marar dhif ah lagama maarmaanka u ah, laakiin markaa biyaha ayaa lagu xannibay godadka dhuumaha.
Inta u dhaxeysa waraabinta 1.5-2.5 cm ee sare ee carrada waa in ay haystaan ​​waqti si ay u qalalaan si dhulkuna u daaqado faraha.
Biyuhu waa inuu ahaadaa ama ka sareeyaa heerkulka qolka. Xilliga jiilaalka, si looga fogaado lakabyada xididada, waraabinta waa in la sameeyaa wax dhif ah.
At sare ee asliga ah run, a bur weyn, oval, iyo dhogorta midab leh u muuqan. Sida ku xusan qodobbada qashinka ayaa ku yaal laba saf oo ubaxyo yar yar oo caddaan ah oo leh nectar badan. Waxay ku daboolan yihiin dhejis dhogor ah.
Haddii shuruudaha oo dhan la buuxiyo, muuska casaan ayaa si joogto ah u barbar dhigaya xaaladaha degaanka.
Wixii koritaanka firfircoon iyo midhaha, bannaan guduud waa shuruud labiska usbuucii ugu dambeeyay ee kuleylka iyo bil kasta qabowga. Si aan u burburin rhizome, bacriminta waa in lagu daro ciidda qoyan.
Marka transplanting u baahan tahay dooro dheri ka weyn mar kasta iyo xoojiyaan xididada ka badan wakhtigii hore.
Guriga, geedka, sida caadiga ah, ayaa si dhakhso ah u koraa, sidaa daraadeed ma sameyn kartid adiga oo aan ku-tallaalid. Waa in la fuliyaa 2-3 jeer sanadkii.
Dhulka ugu fiican ee beerto - mid ka mid ah in laga heli karo geedaha gaajaysan, sida linden, acacia ama fiyuus. Laakiin hoostiisa hoostiisa, xayawaanka ama carrada qalloobta ayaa fiican in aan la qaadin.
Beerto, lakabka ugu sarreeya ee substrate waxaa la saaraa 5-10 cm Waxaa lagama maarmaan ah in lagu daro ciid webiga, ash alwaax, iyo humus ama biohumus si carrada. Daaweynta jeermiska, substrate waxay ka buuxsantaa biyo karkariyo, ka dib marka la isku daro, waa la calcined.
Lakabka dufanka 3-10 cm (ku xiran cabbirka dheriga) waa in loo baahdo. On top ee aad u dhigi kartaa lakabka ah ee ciid, iyo ka dibna substrate dhammeeyeen.
Waxaa fiican in dheriga aan si toos ah loogu shubin sariirta, laakiin dhagxaanta ama dhagaxyada caamka ah. Tani waxay xaqiijineysaa in hawada hawada ay u socoto xididada.
Kobcin muuska cas wuxuu ka iman karaa abuurka, waxaa suurtogal ah in dacaayadda geedka ayadoo qaybinaysa diidmada, geedi socodka asalka.
Waa in la xusoin miraha ay ku jiraan kaliya miraha aan la dabooli Karin. Haddii miraha ay ku habboon yihiin cuntada oo ay ku fiicanyihiin dhadhanka, markaa waxaa habboon in la doorto ilmo dhalid ama dhalmo yar.
Bannaanka guduudan Aad ayay u fududahay in la jaro. Inta lagu guda jiro xubin ka soo jeeda rhizomes si taxadar leh u gooyo caruurta. Waxaa muhiim ah in aan waxyeeleynin dhirta hooyada. Kobaca waa inuu leeyahay xididada wanaagsan iyo qiyaastii 4 caleemo. Ku rid dheriyo yar oo leh ciidda isku midka ah sida warshad qaangaar ah. Qaybaha waxaa ugu fiican rusheeyey dambas.
Haddii aad rabto inaad ka soo baxdo muuska casaan laga bilaabo abuurka, ka dib waxaad ka iibsan kartaa beeraha botanical, dukaamo khaas ah iyo dukaamada internetka, laga soo qaado kuwa la soo qaado.
Marka hore, abuurka ayaa lagu dabaqayaa habka baqdin, taas oo ah, qolkoodu waa yar yahay. Kadibna waxay ku qoyaan biyo kulul ilaa maalin ama laba. Ka dib marka lagu daaweeyo kareemka dhalada ee kilyaha ama phytosporin (si looga fogaado infekshanka fungal), miraha waxaa lagu beeray carrada nafaqo leh oo wanaagsan, halkaas oo aad ku dari kareyso foosto, ciid iyo perlite.
Dalagyo ku daboolan caag balaastig ah oo lagu meeleeyo meel diiran oo dhalaalaya. Qoyaanku waa inuu sarreeyaa. Filimka waxaa la saaraa maalin kasta si buufinta iyo waraabinta. Bil ka dib, filimka ayaa laga saaraa. Heerkulka waa inuusan ka badan 30 darajo, haddii kale abuurku wuu gubi karaa.
Geedo geedo ah ayaa lagu beeray dheriyo yar.
In dabeecadda, geedka way dhici kartaa wareegga wareegga, fangaska, weevil madow. Marka aad guriga joogtid, cayayaanka ayaan ku dhicin. Waxyaabaha kaliya - laga bilaabo la'aanta qoyaan waxay bilaabi kartaa caarada caarada.
Laga soo bilaabo waraabinta xad dhaafka ah ee xididdada iyo caleemaha qudhmi karaa. Xaaladdan oo kale, waxay qaataan midab madow. Qaybaha waxyeelada leh ayaa laga saaraa, iyo jarista ayaa lagu rusheeyey ash.
Bannaanka guduudan waa suurtogal in la koro guriga. Xaalado fudud ayaa ku filan. iftiiminta, waraabinta, qoyaan, heerkulka, ku tallaalidda, iyo dhirta si joogto ah ugu faraxsan yihiin ubax qurux badan iyo midabyo dhadhan leh.